तेस्राे पटक सागकाे मिति सरेपछि सदस्य राष्ट्र रूष्ट भएका छन्ः जीवनराम श्रेष्ठ | Neplays.com
तेस्राे पटक सागकाे मिति सरेपछि सदस्य राष्ट्र रूष्ट भएका छन्ः जीवनराम श्रेष्ठ
By Neplays	 Last updated Mar 7, 2019
नेपालमा आयोजना हुने भनिएको दक्षिण एशियाली खेलकुद सागको मिति तेस्रो पटकका लागि सरेको छ । २०१८ मा नै गर्ने भनिएको साग अब २०१९ को अन्तिम महिना अर्थात डिसेम्बर १ देखि १० सम्म गर्ने भनिएको हो । थाइल्याण्डमा भएको ओलम्पिक काउन्सिल अफ एशियाको बैठकका बेला दक्षिण एशियाली खेलकुद सागका सदस्य राष्ट्रको बैठकबाट सागको नयाँ मिती तय गरेको हो । यसै विषयमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीः
डिसेम्बरमा साग आयोजना हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हामीले डिसेम्बरको १ देखि १० तारिख अर्थात मंसिर १५ देखि २४ गतेसम्म साग आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौं । यो हामीले गरेको तेस्रो पटकको मिति हो । हामीले मूल्यांकन गर्दा डिसेम्बरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने आधार तयार भएको छ । पहिला सरकार पनि अस्थिर थियो । चाँडै चाँडै सरकार फेरिने भएकाले सागलाई प्राथमिकतामा राख्नै सकेन । अहिले अवस्था फेरिएको छ । सरकार पनि स्थिर छ । अहिलेको सरकारसँग सबै हिसाबले छलफल गरेर पूर्वाधार, प्राविधिक र आयोजना गर्दाका विविध पक्षहरुमा सबै कुरा सरकारसँग गरेर तय गरिएको हो ।
युवा तथा खेलकूदमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको तेह्रौ साग तयारी समितिबाट हामीलाई सेप्टेम्बरमै प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । नेपाल ओलम्पिक कमिटि, राखेप र मन्त्रीको उपस्थिीतिमा भएको बैठकमा हामीले सेप्टेम्बरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्दा तयारी पुरा हुन्छ की हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि हामीले डिसेम्बरमा तयारीको कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरि प्रतियोगिता गराउन पर्छ भनेर नै त्यो मिति तय गरेका हौं । सरकारले पनि नोभेम्बर १५ देखि डिसेम्बर १५ को बीचमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने मिति दिएको थियो । थाइल्याण्डमा बसेको दक्षिण एशियाली ओलम्पिक काउन्सिलको बैठकमा विगतका तय भएका मिति र प्रतियोगिता आयोजना हुन नसकेको कारणका बारेमा पनि हामीले समिक्षा गरेका थियौं ।
हामी अन्तिम समयमा आएर काम गर्न बानी परेका छौं, अहिले तोकिएको मितिमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न चुनौती देख्नुहुन्छ ?
जुन किसिमिले अहिले युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, राखेप सबैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने काम भएको छ । यसअघि पूर्वाधारकै कारण प्रतियोगिता समयमै नभएको हो । अहिले पूर्वधार निर्माणको काम धेरै हदसम्म अगाडि बढेको छ । प्रतियोगिताको उद्घाटन र समापन समारोह गर्ने त्रिपुरेश्वरको रंगशाला पुनर्निमाणको काम पनि धेरै प्रतिशत पुरा भएको छ र अब चाँडै पुरा हुने चरणमा पनि छ ।
त्यसैगरी अरु प्रतियोगितास्थलका कामहरु प्नि अघि बढिरहेका छन् । अहिलेसम्मको हाम्रो सोँच भनेको २ वटा शहरमा गर्ने नै भन्ने छ । काठमाडौं उपत्यका र पोखरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरि काम पनि भइरहेको छ । त्यसैले यी सबैकुराहरु हेर्दा गर्न नसकिने भन्ने केही छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकारले साग आयोजनाका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले अब ढुक्क भए हुन्छ ।
तयारीको स्पीड बढाउनु पर्ने त देखिन्छ नी ?
हामीले कामलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने त छ नै । अरु प्राविधिक कुराहरु मिलाउनु पर्छ । प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने कुराहरु पनि छन् । हाम्रो खेलाडी छनोट र खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा राख्नु पर्ने कुराहरु पनि छन् । र यावत व्यवस्थापकीय कुराहरु पनि छन् । त्यसको लागि सचिवालय पनि बनेको छ । केही समितिहरु गठन गर्ने काम पनि भइसकेको छ । अबको एक डेढ हप्ता पछि नै यससँग सम्बन्धित व्यवस्थापकीय र सचिवालयका कामहरु तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ । हामीलाई प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि प्रशस्तै समय छ ।
अस्तिसम्म हामीले सेप्टेम्बरमै आयोजना गर्ने तयारी थियो ।अलि बढी सेफ साइडमा बस्न खोजेको पनि हो । त्यसैले सेप्टेम्बर अगाडिनै सबै कामहरु सम्पन्न गर्न सक्यौं भने त्यसमा बाँकी भएका कामहरुलाई सल्टाउन सजिलो हुन्छ । हाम्रो लक्ष्य भनेकै १३औं साग सम्झन योग्य बनाउने गरि प्रयास गरिरहेका छौं । सरकारले भिजिट २०–२० मा पर्यटकहरु भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । साग गेम्स त्यसको पूर्वअभ्यास जस्तो पनि हुन्छ ।
सागबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्ला ?
सागको नेपाल डिजाइनर नै हो । १३ औं शृंखला हुँदै छ । साग भनेको दक्षिण एशियाको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि भ्रातृत्वको पक्ष यसमा बढी प्रभावित छ । तै पनि दक्षिण एशियाका लागि यो ओलम्पिक जस्तै हो । दक्षिण एशियाबाट ओलम्पिकमा पुग्ने खेलाडीहरु धेरै थोरै छन् । त्यसैले हामीले सागलाई ओलम्पिकको रुपमा लिन सकिन्छ । यसले यस क्षेत्रका खेलाडीहरुलाई एक्स्पोजर र स्तरोन्नती गर्नका लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गदर्छ । २०१६ मा हामीले आयोजकको हिसावले झण्डा लिँदै गर्दा नेपालमा २०७२ सालमा गएको भूकम्पको पनि चर्चा भएको थियो ।
तत्कालिन खेलकूदमन्त्रीको उपस्थितिमा हामीले गर्न सक्छौं भनेर झण्डा लिएका हौं । हामीले तेस्रो पटक मिति सार्नेक्रममा ओलम्पिक काउन्सीलका सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाउने काम त भएको थियो । तर हामीले सन २०१९ भित्र प्रतियोगिता आयोजना गर्छौ भन्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थियौं । थाइल्याण्डमा बसेको बैठकमा यहाँबाट मन्त्रीले पठाएको पत्रका आधारमा सबै देशले सहमति जनाएका छन् । त्यसैले हामीले डिसेम्बरमा साग आयोजना गर्ने मिति तय गरेका हौं ।
कथम कदाचित डिसेम्बरमा हुन सकेन भने ?
त्यता तर्फ त सोँच्दै नसोचौं । डिसेम्बरमै हुन्छ गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाई राखौं । सरकारले प्रतियोगिता आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले त्यता तर्फ नसोँच्दा नै राम्रो हुन्छ ।
के गर्दा अझै राम्रो हुन्छ ?
बृहत खेल हो । सामान्य देशभित्र हुन राष्ट्रिय खेल जस्तो मात्र होइन । यो खेलका अन्तर्राष्ट्रिय जुन मापदण्ड त्यो हामीले पुरा गर्नु पर्छ । मापदण्ड भनेको प्रतियोगितास्थलको तयारी, प्रतिस्पर्धा गर्दा प्रयोग हुने सामानहरु र रिजल्ट म्यानेजमेन्टको सिस्टमहरु बसोबासको कुराहरु सबैलाई राम्रो गर्नु पर्छ । खेलाडीहरुलाई समयमै प्रतियोगितास्थल पुराउनुपर्ने कुराहरु सुरक्षा पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।
नेपालमै प्रतियोगिता आयोजना गर्दा नेपाली खेलाडीले राम्रो नतिजा हात पारुन भन्ने अपेक्षा पनि छ त्यसका लागि हामीले नै उनीहरुलाई उचित प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । त्यसैले यस्ता कुराहरुमा हामीले तत्काल शुरु गरिहाल्नु पर्छ । नत्र भने भौतिक पूर्वाधार तयार भए पनि बाँकी कुराहरु तयार नहुँदा प्रतियोगितालाई बाधा पुग्छ ।
स्पाेर्टस अवार्डकाे उत्कृष्ट खेलाडीकाे मनाेनयनमा क्रिकेटकाे बर्चश्व
२०२६ काे विन्टर ओलम्पिक मिलान र काेर्टिनाले आयाेजना गर्ने
सदस्यसचिव विष्टकाे अनुभव- खेलकुदमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हावी भाे
सदस्य सचिव विष्टको कार्यकाल आज सकिँदै
फेरि सदस्य सचिव बन्ने केशब विष्टको दावी
संसदमा खेलकुद मन्त्रीकाे जवाफ, ‘खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा…